🥇 ▷ Rikoodhyo aan kastaa dhicin: kaydinta codsiyada Siri ee Apple bakhtii ✅
Rikoodhyo aan kastaa dhicin: kaydinta codsiyada Siri ee Apple bakhtii
Taasi Apple. Amazon iyo Google waxay kaydin doonaan codsiyada kaaliyayaasha codka dhijitaalka ah waxayna qiimeynayaan qeyb yar oo ka mid ah dadka si loo wanaajiyo adeegyada ma aha wax qarsoodi ah. Qeex qaabeyn ah oo soo saare khabiir ah oo loogu talagalay macdanta ‘iOS’ ayaa hadda suurtagal ka dhigeysa in laga hortago ku kaydinta macaamiisha Apple.
Arrinta ku saabsan keydinta codsiyada Siri waxay soo baxday mar kale wiiggii hore goorta The Guardian Macluumaadka shaqaale ka socda shirkad qandaraasle, sidaasoo ay kujiraan diiwaannada ay gacanta ku hayaan shaqaaluhu waxaa ku jira cajalado maqal ah oo aan loo baahnayn oo ay dadku qaateen intii lagu jiray muranka, galmada ama iibinta daroogada. Apple ayaa markaa sharraxday in kaliya 1 boqolkiiba dhammaan diiwaannada ay falanqeeyaan bini-aadamka si loo wanaajiyo aqoonsiga hadalka ee Siri, iyadoo lala xiriirinayo Apple Si kastaba ha noqotee, ID-yada isticmaaleyaasha kuma xirna duubista, sidaa darteed meeleyn cad ayaan suuragal ahayn.
Tallaabooyinka rakibida ee qaabeynta qaabeynta on iOS (Image: 9to5mac)
Muuqaalka macruufka iOS wuxuu awood u siinayaa ikhtiyaarka qarsoon ee ka dhanka ah kaydinta
Khabiir ku takhasusay arrimaha cilmiga dijitaalka ah Jan Kaiser ayaa hadda ku daabacay astaanta qaabeynta macruufka ee GitHub, oo kaydinta kombuyuutareed ee codsiyada Siri ay ku baabiinayaan labadaba iPhone iyo iPad. Siri laftiisa wali waa la istcimaali karaa. Muuqaalka loogu magac daray “Ka hortag geynta galka server-ka ee Siri Commands.mobileconfig” waa in laga soo dejisto macruufka oo lagu rakibaa meesha. Waxay curyaamisaa shaqada “U oggolow geedka kaydinta server-ka ee amarrada Siri”, kaas oo aragti ahaan loo tirtiri karo qof kasta oo leh astaan ​​u dhigma, haddii tan lagu sameeyo Configurator of Apple abuuray macOS.
Meelna kuma jirin warbixinnada ku saabsan qandaraasleyaasha dhageysanaya codsiyada Siri waxay leeyihiin hagitaan sida loo baabiin karo tan. Qaybta ay daabacday Guardian ayaa sheegay inaysan suurtagal ahayn in laga baxo, waxyaabaha soo socdana waxay ku celinayaan isla qaladka. Sidan waa sidan: https://t.co/cbZXIipma0 Waan ku soo dhawaynayaa
– Jan Kaiser ???? ️ (@ jankais3r) July 29, 2019
Apple waa inay ka dhigtaa qof dabeecad u wada leh dhammaan
Adigoo ku daabacaya koodhka isha on GitHub, astaanta la bixiyay waxay xaqiijineysaa in ikhtiyaar kale aan la beddelin. Isla waqtigaas, Jan Kaiser wuxuu ka dalbanayaa Apple inay ka dhigto ikhtiyaarka u furan dhammaan isticmaaleyaasha iyada oo loo sii marayo dejinta nidaamka qalliinka. Kii fikirkaas la wadaaga, wuxuu ku boorinayaa, Apple-ka foomka jawaab-celinta.